Kutaurirana naPere Cervantes, munyori weEl chico de las bobinas | Zvazvino Zvinyorwa
Mifananidzo: Twitter yaPere Cervantes.
Peter Cervantes ine nyowani nyowani, Mukomana ane machira, mushure Inotsvaga y Maminetsi matatu eruvara, vakundi ve prizes de Novel Cartagena Negra uye izvo zve Tsamba dzeMediterranean yeiyo yakanakisa nyaya yekuparwa kwemhosva. Vasati vavawo Breakwater y Havatibvumire isu kuva vana. Munyori weBarcelona andipa iyi hurukuro kwaanotaura nezvese zvishoma zvishoma: zviitiko zvehupenyu, mabhuku uye vanyori kuda, tsika kana uchiverenga kana kunyora kana yako maonero nezvake yekugadzirisa panorama zvazvino. Luye ndinonyatsotenda nguva yako nemutsa nekundishandira.
Kubvunzana naPere Cervantes
Pere Cervantes: Ini handina chokwadi pakati Ivanhoe y Pfuma chitsuwa. La nyaya yekutanga , que ndakanyora sekudaro yaive mugore ra2004, razvino rambomira bhuku rine zita Mazana matatu nemakumi matanhatu nematanhatu emuvhuro. Mariri akarondedzera chikamu che ruzivo rwangu semucherechedzi werunyararo kubva kuBalkan. Rimwe zuva ini ndichadzoka nenzira yekunyora kunetsana kuya kwandakawana zvakanyanya.
PC: Zvakanaka, dzokera kunhoroondo inozivikanwa naRobert Louis Stevenson, Pfuma chitsuwa. Ini ndinofungidzira pazera diki kwazvo iro bhuku rakanditungamira kune avo nyika dziri kure yangu uye izvo, zvakadaro, ndaigona kuzvifungisisa zvakadzama, kunyangwe kuvabata nezvose zvinhu zvandakapihwa nenyaya. Adventures, chakavanzika uye mutinhimira kuti, kunyangwe kufamba kwenguva, handina kukwanisa kukanganwa. Stevenson akazvinyora kuitira kuvaraidza mwanakomana wake uye zvaakaita zvaive fadza vanhu. Chii chimwe chaungade iwe!
PC: Ini ndaisagona kuve neyako Francisco Gonzalez Ledesma, Vazquez Montalban, Johani Marse, Arthur Perez-Reverte, Charles Ruiz Zafon, Don Winslow, Pauro oyster, Emmanuel Basa, Vargas Llosa, Rose Montero, Tana French, Harlan CobenJoyce Carol Oates, Lewis Landman… Chii chandinoziva. Kune vakawanda vanyori vanondifadza nenyaya dzavo.
PC: Iyo Pijoaparte yaMarsé. Kunyangwe ndichifunga kuti ndakasangana navo vamwe vacho.
PC: Ingova chinyararire kana kurega ine mahedhifoni uye mumhanzi wekare kana of Jazz kumashure.
PC: Ndakaverenga pese pandinogona uye chero kupi. Asi zviri pachena kuti imba yangu Iyo ndiyo yakanakisa nzvimbo yayo. Ose ari mu imba yokutandarira, sezvandiri hofisi uye muzhizha mu jardin.
PC: Dzese dzandakambotaura kare pamwe nemaviri gumi nemaviri andisina kutaura. Ndinotenda nemoyo wese izvozvo munyori anotanga kuve wese muverengi, chipanji chehupenyu nemabhuku. Vazhinji vedu tinogashira akawanda maitiro, nekuziva kana nekusaziva. "Ini ndiri gungwa remasimba ane nzara dzekunyora dzisina mazita", heh, heh, heh, heh, heh.
AL: Ndeapi marudzi ako aunofarira?
PC: Rudzi rwevatema yagara ichindikwezva kupfuura vamwe, asi ndinozvisimbisa nayo mhando dzese dzerondedzero. Mavara haatyise kana kundikwezva. Ini ndinotarisa zvimwe zvinhu kana ndichisarudza kuverenga. Zvinoratidzika kwandiri zvisina musoro iyo nzira yekutarisa munyori weakawanda kana mashoma unhu zvichibva pachikadzi avo vanowanzonyora.
PC: Izvozvi ndiri kuverenga Ndarama nhema, ivo Dominique manotti, Yakasiyana-siyana Kugadziriswa. Ndiri kunakidzwa nazvo. Y Ndiri kuzvinyora pachangu yenhau yangu inotevera yazvo panguva ino yandinofarira kuchengeta el zano uye dingindira en zvakavanzika.
PC: Ini ndinongova munyori anoverenga zvakawanda uye anonyora zvaanogona. Ini handizotaure nezveye indasitiri yekutsikisa iyo Ini ndinongoziva chikamu chinondibata. Zviripachena kuti iyo nhamba de zvinyorwa ndeye nyeredzi maererano netsika yekuverenga yavanoti tinayo kuSpain. Ini ndinongoziva kuti mwedzi mishoma yapfuura iyi ini ndaona dzimba dzemitambo dzakazara vanopinda a Kuburitswa Kwebhuku uye ndizvozvo Nhau huru yandinogara nekupembera nayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Kubvunzana naPere Cervantes, munyori weEl chico de las bobinas